Iphrofayela Inkampani - Changzhou Zhanhang International Co., Ltd
Zhan Hang, a yokuhweba nokukhiqiza combo, kuyinto professional CNC umshini amathuluzi, asebenza ezimbonini kanye ifektri ezishintshayo ucwaningo imishini nokuthuthuka, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa ephezulu tech amabhizinisi.
ukuphathwa Ithimba lethu eminyakeni engaphezu kuka-10 irobhothi ezimbonini kanye yokukhiqiza isipiliyoni. Imikhiqizo eziyinhloko zihlanganisa: CNC lathes, machining izikhungo, truss amarobhothi, ngokuhlanganyela ingalo irobhothi, CNC uhlelo. Imikhiqizo ehlobene Aerospace, yokusansimbi, imoto umkhakha, wesitimela zokuthutha, imfundo, ezempilo, ubunjiniyela imishini, amandla ahlanzekile, umshini amathuluzi, Imboni yezokuvikela kanye nakweminye imikhakha.
Uma sibheka phambili esikhathini esizayo, sizozama ukusiza amabhizinisi uthumele kusuka "yokukhiqiza" ukuze "ukudala", ukuhlinzeka, esiwusizo, izixazululo eziphambili ukonga amakhasimende sakhele ngaphezulu.
Ikheli: 1022, ibhilidi 1, Elegant Commercial Plaza, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Isifundazwe China